တားရော့ကတ်အား အဆောင်အဖြစ်ထားရှိခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » တားရော့ကတ်အား အဆောင်အဖြစ်ထားရှိခြင်း
Posted by koyin sithu on Jun 14, 2012 in Education, How To.., My Dear Diary, Think Different | 12 comments
မယ်တော်ကြီး (ငွေကြေးကိစ္စ၊ စီးပွားလာဘ်လာဘရွှင်စေရန်)
ချစ်သူနှစ်ဦး (အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများအတွက်)
ထိန်းချုပ်ခြင်း (ငွေမြဲစေသောကိစ္စ၊ ငွေကြေးအကုန်အကျများခြင်းကို ကာကွယ်သောကိစ္စအတွက်)
မှော်ပညာရှင် (အဓိဋ္ဌာန်ကိစ္စ၊ဂန္ဓာရီကိစ္စ၊ သစ္စာဆိုရသောကိစ္စများအတွက်)
ကမာ္ဘလောက (နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးသွားမည့် ကိစ္စများအတွက်)
ကျွန်တော်က တားရော့ခ် ခရေဇီဖြစ်တဲ့အပြင် ဗေဒင်တွက်လျှင်လည်း
တားရော့ခ်သည် ကျွန်တော်ရဲ့ Major အနေနဲ့ စတွက်ပါတယ်။
သိပ်တိကျတဲ့ အဖြေတွေကို အမြဲတမ်း ကျွန်တော့်ကို ထုတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။
အဘဆရာကြီးက တားရော့ခ်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ အဆောင်လက်ဖွဲ့ အဖြစ်
ထားလို့ရတယ်လို့ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျစ်ပစီ လူမျိုးတွေဆီမှ
စီးဆင်းလာတဲ့ ဂျစ်ပစီ ပညာရပ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့
တားရော့ခ်ကတ်တွေကို ယုံကြည်လေးနက်စွာဖြင့် ဆောင်ထားခြင်း၊
ဖယောင်းတိုင်းမှာ ပတ်၍ နေ့စဉ် မီးထွန်းပြီး ဆုတောင်းမှုပြုခြင်းဖြင့်
လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်။ မိမိအဆောင်ထားသည့် တားရော့ခ်
ကတ်ပြားအား နေ့စဉ် ရေမွှေးဆွတ်၊ နမ်းရှူံ့ပေးခြင်း အပြင် တားရော့
မန္တန်တော်အား ၃ ကြိမ်ရွတ်ဆိုပေးရပါမည်။
Within me and around me, is the fullness of Power,
ကျွန်ုပ်၏ အဇ္ဈတ္တတွင်လည်ကောင်း၊ ဗဟိဒ္ဓတွင်လည်ကောင်း
တန်ခိုးစွမ်းရည်၊ မေတ္တာတရား နှင့် အသိဉာဏ်ပညာတို့ သည်
မြန်မာလိုလည်း ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့
ကျွန်တော်ကတော့ အဆင်မပြေမှုလေး တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်
ဒီကတ်ပြားလေးတွေကို ဆောင်ထား၊ မီးထွန်းဆုတောင်းစေချင်တယ်ဗျာ..
တားရော့ခ်မှာ ပြထားတဲ့ အချို့ပုံတွေမှာပါတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပေါ်နေတာတွေက
ရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အဓိပါယ်ကို ဖော်ပြပေးတာပဲ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်…. ;)
နောက်ပိုင်း သင်တန်းတစ်ခုတက်တုန်းက တားရော့ခ်ဗေဒင်မယုံတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့
တားရောခ့်ကို ချစ်ခင်ယုံကြည်တဲ့ ကိုရင်နဲ့ ဉာဏ်ပြိုင်အားစမ်းရင်း
ကိုရင်က ဟောကိန်းကို ကောင်မလေးကို စာအိတ်ထဲ ထည့်ပေးပြီး ၃လအကြာ
အဲ့ဒီစာအိတ်ကို ဖွင့်ပြီး အဖြေမှန်၊ မမှန် လောင်းကစားလုပ်ခဲ့ကြတဲ့
ပြိုင်ပွဲလေးအကြောင်း ဒရမ်မာဆန်ဆန်ရေးရင်ကောင်းမလားလို့ ကြံနေပါတယ်။
ကြံတာကြံပြီး အပျင်းတစ်နေသောကြောင့် ရေးဖြစ်မယ်မထင်တော့ပါဘူးလေ…
ရေးကြည့်ပါလား ကိုရင်စည်သူရယ်……….စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တာရော့ကိုလည်း စိတ်တော့ဝင်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလောက်ထိမယုံဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ပိုယုံလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးရေးပါလား။ အားပေးမှာပေါ့။
ကိုရင်စည်သူရေ ….. ကျွန်မလည်း တားရော့ပညာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ……။
လေ့လာလိုက်စားမှုအားနည်းပေမယ့် ….. အိပ်ယာထဲ အမြဲသိမ်းထားတဲ့ တားရောထုတ်တော့ရှိတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တွေ အရမ်း ညစ်တာမျိုး ၊ ဝေခွဲရခက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ …ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ထုတ်ကြည့်ဖြစ်တာများတယ်.. ။ ကဒ်ရဲ့ဖော်ပြချက် အဆိုးတွေလည်း ရှိသလို ၊ အကောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ကောင်းတာလေးများတွေ့လျှင် ….ပျော်တတ်ပြီး … ဆိုးတာလေးများ ပါလာလျှင် … ဘယ်သူမှ မသိတောင် တိတ်တိတ်လေး မျက်ရည်ဝဲမိတယ် … ။ အဟိ အဆိုးတွေကဒ်မှာ ပြလာလျှင် .. နေတာထိုင်တာ စကားပြောတာကအစ ပြသနာမဖြစ်အောင် သတိထားပါတယ် … ။ ကိုယ်တိုင်သုံးတားရော့အနေနဲ့ပဲ …လူတွေအားလုံးအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ .. ထုတ်ကြည့်ဖြစ်တယ် …. ။
စိတ်ဝင်စားဖို ့လဲ ကောင်းတယ်.ပျော်ဖို ့လဲ ကောင်းတယ်..
တစ်ခါ ဘော်ဘော်တစ်ယောက် ဆေးကွဲပြီး တွက်ပေးတာ လုံးဝ ကွက်တိပဲ..
အဲဒီကဒ်တွေကဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ။ ကျွန်မှာ တားရော့လမ်းညွှန်စာအုပ်ပဲရှိပြီး ကဒ်တွေပျောက်သွားလို့။
တားရော့ ဗေဒင်က တဒင်္ဂ အဖြစ်အပျက်အတွက်တော့ တကယ်မှန်တယ်ဗျ …
ကိုယ်တိုင်မကြည့်တတ်လို့ ပိုက်ဆံပေးပီး မေးတဲ့ ဆီမှာ သွားကြည့်ဖြစ်တယ် …
တခါမှတော့ တားရော့ ဗေဒင် မှန် မမှန် မစမ်းဘူးသေးဘူး။
ဗေဒင်ဆရာ တားရော့ မေးတာ ဖြေတာ ကြုံဖူးတယ်။ အဲဒီ ဗေဒင်ဆရာကတော့ တားရော့ကို ခဏခဏ နမ်းပြီး ရေမွှေးပဲ ဖြန်းနေရတယ်။ တခါဆွဲလိုက် မဟုတ်သေးဘူး ထပ်ဆွဲလိုက် အဲလို ခဏခဏ လုပ်ခိုင်းနေရတယ်။ အဲလို ၃ကြိမ်လောက် ဆွဲလို့မှ အဆင်မပြေရင် တခါ နမ်းလိုက် ရေမွှေးဖြန်းလိုက် ထပ်လုပ်ရပြန်ရော ဘယ်လိုလဲတော့ သိဘူး။ တိကျတဲ့ အဖြေ က ထွက်မလာဘူး။ ခါတိုင်း ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး ငါ့ကောင်က စိတ်မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ ကြုံဖူးတာလေး ပြောပြတာ.. တခန်းလုံးလည်း ရေမွှေးနံ့ကို မွန်ထူ သွားတော့တာပဲ။
အစ်မဆူး … စမ်းချောင်းထဲက ဒေါ်ချစ်စုသွယ်လည်း အဲ့လိုပဲ … ရေမွှေးပုလင်းကို ရှေ့ချထားတာ … ။
တချိန်လုံး တဖြီးဖြီးနဲ့ စွတ်တယ် …. ရေမွှေးနံ ့ကခေါင်းတောင်ကိုက်တယ် တခါတလေဆို … ။
ဒါနဲ့ စကား မစပ်….ကရင်စီရေ … အလကားနေရင်း စကားအထနကောက် လူမသိ သူမသိ တဖက်သတ်တင်းနေတဲ့လူ မရှိဖို့ .. ဘယ်လို အဆောင်လေးသုံးပြီး ယတြာခြေရမလဲ မသိဘူးနော် … ။
ကိုယ်ကတော့ သတိတောင် မထားမိပါဘူးအေ … ။ သူ့မှာ တယောက်တည်း အဓိပ္ပါယ်လွဲပြီး …တဖက်သတ်တင်းနေတဲ့အကြောင်း ဒီစနေကမှ သတင်းပေးလာသူရှိလို့ …. ။ အဆောင်ကောင်းလေးတွေတော့ ဆောင်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ် …. ။ ကံ နိမ့်နေလို့ …